Isahluko 6 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Nsuku zonke nithandaza kuNkulunkulu enizenzele yena engqondweni, nizama ukuqonda izinhloso Zami, ukuzwa ukuthi kunjani ukuphila. Kodwa, uma amazwi Ami ehla, niwabuka ngenye indlela; nithatha amazwi Ami noMoya Wami njengento eyodwa ehlangene, kodwa nikhipha isiqu Sami inyumbazane, nicabanga ukuthi umuntu enginguye akakwazi nhlobo ukusho amazwi anjalo, nokuthi angumphumela wokwenza koMoya Wami. Ningaba kanjani nolwazi ngesimo esifana nalesi? Nikholelwa amazwi Ami, ngokwezinga elithile kodwa ngenyama le engiyembathayo, kakhulu noma kancane nilandela imicabango yenu, enizindla ngayo usuku nosuku, nithi: “Kungani enza izinto ngale ndlela? Kungenzeka yini ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu? Ngeke kwenzeke! Ngokubona kwami, uyafana nje nami – umuntu ojwayelekile.” Nalapha, ungasichaza kanjani isimo esifana nalesi?
Uma nje kuthintwa igama likaPetru, wonke umuntu ugcwala indumiso, akhumbule masinyane zonke izindaba zikaPetru—ukuthi wamphika kanjani kathathu uNkulunkulu ngaphezu kwalokho wasebenzela uSathane, elinga uNkulunkulu, kodwa ekugcineni wabethelwa esiphambanweni ebhekiswe phansi ngenxa Yakhe, nokunye. Manje ngibona ukubaluleka okukhulu ekunixoxeleni ngokuthi wangazi kanjani uPetru kanjalo nomphumela wakhe wokugcina. Le ndoda enguPetru yayisezingeni eliphezulu kakhulu, kodwa izimo zakhe zazingafani nezikaPawulu. Abazali bakhe bangishushisa, babengabamadimoni kaSathane, ngalesi sizathu umuntu angeke athi badlulisela le ndlela nakuPetru. UPetru wayebukhali engqondweni, enobuhlakani bokuzalwa, etotoswa abazali bakhe kusuka esengumfanyana; uthe esekhulile, kodwa-ke, waba yisitha sabo, ngoba wayehlala efuna ukungazi, lokhu kwabangela ukuthi ashiye abazali bakhe. Lokhu kwakubangwa ukuthi, okukuqala, wayekholwa ukuthi amazulu nomhlaba nakho konke kusezandleni zikaSomandla, nokuthi konke okuhle kuvela kuNkulunkulu nokuthi kuqhamuka ngqo Kuye, ngaphandle kokuthi kudlule kuSathane. Ngesibonelo esiphikisayo sabazali bakhe sokuthi sisebenze ukuqhathanisa, lokhu kwamenza ukuthi akulungele ukubona uthando Lwami nomusa Wami, okwakumenza abe nentshisekelo enkulu yokungifuna. Wanaka kakhulu ukuthi kungabi kuphela ukudla nokuphuza amazwi Ami, kodwa kakhulu ukuqonda izinhloso Zami, futhi wayehlala enobuhlakani futhi eqaphele emicabangweni yakhe, ngalokho wayehlala ejulile ekhaliphile emoyeni wakhe, yikho wayekwazi ukungijabulisa kukho konke ayekwenza. Empilweni ejwayelekile, waqinisekisa ukuthi uyazididiyela izifundo zalabo abahlulekile esikhathini esedlule ukuze azigqugquzele emizamweni yakhe, ngokwesaba okukhulu kokuthi angase awele ogibeni lokwehluleka. Waphinde waqinisekisa ukuthi uyaluthatha alugcine ukholo nothando lwabo bonke eminyakeni ababeke bathanda ngalo uNkulunkulu. Ngale ndlela akubanga kokubi kuphela, kodwa okubaluleke kakhulu, kokuhle ukusheshisa kwakhe inqubekela phambili yokukhula kwakhe, waze waba nguyena muntu phambi Kwami owangazi kahle. Ngenxa yalokhu, akunzima ukubona ukuthi wayengakubeka kanjani konke ayenakho ezandleni Zami, akasaziphethe ngisho ekudleni, ekugqokeni, ekulaleni, noma indawo ahlala kuyo, kodwa wenza ukunganelisa kuzo zonke izinto isisekelo sokuthokozela inala Yami. Izikhathi eziningi ngambeka ngaphansi kwezilingo, okwamshiya ecishe wafa, kodwa naphakathi kwalezi zilingo ezingamakhulukhulu, akazange nakanye aphelelwe ukholo Kimi noma adumazeke Ngami. Yize noma sengithe sengimlahlile, akazange aphelelwe amandla, waqhubeka nokungithanda ngendlela engokoqobo nangezimiso zokwenza ezedlule. Ngamtshela ukuthi, yize engithanda, angizange ngimncome kodwa ngingayomphonsa ezandleni zikaSathane ekugcineni. Phakathi kwalokhu kulingwa, okungayithintanga inyama yakhe kodwa okwakuyizilingo ngamazwi, waqhubeka wathandaza Kimi: “O, Nkulunkulu! Emazulwini nasemhlabeni nasezintweni zonke, ingabe ukhona umuntu, isidalwa, noma yini okungekho ezandleni Zakho, Wena Somandla? Uma ufisa ukungitshengisa umusa, inhliziyo yami iyothokoza kakhulu ngomusa Wakho; uma ufisa ukungahlulela, ngingafanele, ngizwa imfihlakalo ejulile yemisebenzi Yakho, ngoba ugcwele igunya nobuhlakani. Yize inyama yami ingahlupheka, ngiduduzekile emoyeni wami. Ngingenza kanjani ukuthi ngingabuphakamisi ubuhlakani nemisebenzi Yakho? Noma ngingafa emva kokukwazi, ngizobe sengikulungele ngivuma futhi. O, Somandla! Impela akusikho ukuthi awufisi ngempela ukuthi ngikubone? Impela akusikho ukuthi angikufanele ngempela ukwahlulelwa Nguwe? Kungenzeka ukuthi ikhona into ekimina ongafisi ukuyibona?” Phakathi kwayo yonke le nhlobo yezilingo, yize noma uPetru wayengakwazi ukuqonda kahle izinhloso Zami, kuyacaca ukuthi wakubona njengokuqhosha nokuzidumisa ukusetshenziswa Yimi (kungaba kuphela ukuthola ukwahlulela Kwami ukuze abantu babone ubukhosi nolaka Lwami), futhi akazange neze adikibale ngenxa yokubekwa ekulingweni. Ngenxa yokuthembeka kwakhe phambi Kwami, nangenxa yezibusiso Zami phezu kwakhe, ube yisibonelo nesifanekiso kubantu iminyaka eyizinkulungwane. Ingabe lokhu akusona isibonelo okumele nisilandele? Ngalesi sikhathi, kumele nicabangisise nibone ukuthi kungani nginikeze indaba ende kangaka kaPetru. Lokhu kumele nikusebenzise njengendlela yokuziphatha.
Yize bembalwa abantu abangaziyo, angeke ngalokho ngiveze intukuthelo Yami kubantu, ngoba abantu banamaphutha amaningi okwenza kube nzima kubo ukufinyelela kuleli zinga engilifunayo. Ngakho-ke sengibe nozwelo kubantu iminyaka eyizinkulungwane, kuze kube manje. Kodwa ngethemba ukuthi angeke, ngenxa yozwelo ami, nikuthole kulula ukuzenzela nje; kodwa kumele, ngoPetru, ningazi futhi ningifune; ngazo zonke izigameko zakhe, kufanele nikhanyiselwe ngendlela engakaze yenzeke ngaphambili, futhi ngalokhu nifinyelele emazingeni okungakaze kufinyelele umuntu kuwo. Emhlabeni nasemkhathini jikelele, phakathi kwazo zonke izinto ezulwini nasemhlabeni, zonke izinto emhlabeni nasezulwini zifaka amandla azo esigabeni sokugcina somsebenzi Wami. Ngiqinisekile anifuni ukuba yizibukeli, niyiswa ngapha nangapha yimpik kaSathane? USathane uhlale eshwabadela ulwazi abantu abanalo Ngami ezinhliziyweni zabo, njalo, ekhiphe amazinyo ekhiphe nezinzipho, ezabalaza kabuhlungu okokugcina esezofa. Ingabe manje ufisa ukuthunjwa amaqhinga akhe agcwele inkohliso? Ingabe ufisa, ukuthi njengamanje isigaba sokugcina somsebenzi Wami sesiphelile, uziqedele wena impilo yakho? Nginesiqiniseko sokuthi anilindile ukuthi ngikhiphe ububele Bami futhi? Ukungifuna kuyinto ebalulekile, kodwa akumele ukhohlwe ukwenza okweqiniso. Ngiveza ukuqonda Kwami ngqo kini ngamazwi Ami, ngethemba lokuthi nizokwazi ukuzinikezela ekuholweni Yimi, niyeke ukulandela amaphupho enu noma amacebo enu.
Okwedlule: Isahluko 5
Okulandelayo: Isahluko 7